Momba anay - Wuhan XYB Geophysical Exploration Equipment Co., Ltd.
Wuhan XYB Geophysical Exploration Equipment Co., Ltd.dia voasoratra anarana ary naorina tamin'ny 13 Mey 2008. Any Wuhan any Shina no misy azy. Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana fitaovam-pitrandrahana solika, fitaovana fandavahana sy famokarana ary fitaovana fikarohana momba ny jeofyika. Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9000, fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana ny asa.
Ny vokatra mitarika amin'ny geophone fitrandrahana seismika dia manana andiany enina, karazany mihoatra ny 60. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana solika, mineraly ary jeolojika, làlana, tetezana, fananganana tohodrano sy tionelina, fivezivezena mekanika mavesatra, fanaraha-maso horohoron-tany sns.
XYB dia manambatra talenta sy teknolojia matihanina manerantany, manana mpiasa iraisam-pirenena tena mahay.
Mihoatra ny 60 ny karazany nahazo alalana ny fangatahana patanty nasionaly, ao anatin'izany ny patanty 20 mahery ho an'ny famoronana, karazana zava-bita siantifika sy teknolojia avo lenta mihoatra ny 10, ary mari-pankasitrahana ara-tsiansa sy teknolojia mihoatra ny 20 nasionaly, faritany ary monisipaly. Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9000, fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana ny asa.
Ny tsenan'ny vokatra dia nandrakotra ny tanimbary sy ny sahan'afo lehibe, ary natondrana tany Eropa, Amerika, Afrika ary Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra 50 mahery. Ny fizarana tsena dia lohalaharana amin'io orinasa io any Shina. Ny fahombiazan'ny vokatra sy kalitao tsara dia azo raisina sy fiderana lehibe.
Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hanohy "marin-toetra, fitandremana, henjana" fomba fandraharahana, miaraka amin'ny "mifototra amin'ny mpampiasa, mamorona sanda ambony indrindra ho an'ireo mpampiasa" tanjon'ny orinasa, miaraka amin'ny haitao mandroso kokoa, vokatra avo lenta, vidiny mirary, miaraka amin'ireo mpanjifanay hihaona amin'ny ho avy mamirapiratra.